UYesu Ufundisa NgoBukumkani BukaThixo | Isigidimi SeBhayibhile
UYesu ufundisa abafundi bakhe izinto ezininzi, kodwa unikela ingqalelo ekhethekileyo kwinto enye—uBukumkani bukaThixo
WATHUNYELWA ntoni uYesu emhlabeni? Wathi nasi isizathu: “Ndimele ndizivakalise iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo nakwezinye izixeko, ngenxa yokuba ndithunywe oko.” (Luka 4:43) Makhe siqwalasele izinto ezine uYesu awazifundisayo ngoBukumkani obabungundoqo kwizinto awayeshumayela ngazo.
1. UYesu wayeza kuba nguKumkani. UYesu watsho ngokungqalileyo ukuba unguMesiya owayexelwe kwangaphambili. (Yohane 4:25, 26) Wabonisa nokuba nguye uKumkani owayekumbono womprofeti uDaniyeli. Waxelela abapostile bakhe ukuba ngenye imini uya kuhlala “kwitrone yakhe ezukileyo” baze nabo bahlale kwiitrone. (Mateyu 19:28) Wathi eli qela labalawuli ‘ngumhlambi wakhe omncinane,’ waza wathi unazo “nezinye izimvu,” ezingeyonxalenye yelo qela.—Luka 12:32; Yohane 10:16.
2. UBukumkani bukaThixo buza kulawula ngokusesikweni. UYesu wabonisa ukuba uBukumkani buza kukutshayela neengcambu okungekho sikweni ngokulingcwalisa okanye ngokulenza ngcwele igama likaYehova uThixo. Kwakhona buza kulithethelela kulo lonke ungcikivo olwaziswa nguSathana ukususela kwimvukelo yase-Eden. (Mateyu 6:9, 10) Wayekwafundisa amadoda namabhinqa, izityebi namahlwempu, ngaphandle komkhethe. Nangona ngokuyintloko wayethunyelwe ukufundisa amaSirayeli, wanceda namaSamariya nabeeNtlanga, okanye abangengomaYuda. Ngokungafaniyo neenkokeli zonqulo zomhla wakhe, wayengenamkhethe.
3. UBukumkani bukaThixo babungayi kuba yinxalenye yeli hlabathi. UYesu wayephila ngexesha ekwakugquba izidubedube zezopolitiko. Ilizwe lakowabo lalilawulwa bubukhosi basemzini. Kodwa xa abantu babezama ukumbandakanya kwezopolitiko, wabaleka. (Yohane 6:14, 15) Waxelela omnye wezopolitiko oku: “Ubukumkani bam abuyonxalenye yeli hlabathi.” (Yohane 18:36) Wathi kubalandeli bakhe: ‘Aniyonxalenye yehlabathi.’ (Yohane 15:19) Akazange abavumele ukuba basebenzise izixhobo zemfazwe, kwanaxa babefuna ukumkhusela.—Mateyu 26:51, 52.
“Wahambela . . . kwiidolophana ngeedolophana, eshumayela yaye evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo.”—Luka 8:1
4. UKristu uya kulawula ngothando. UYesu wathembisa ukuba uya kubahlaziya abantu, ayenze khaphukhaphu imithwalo yabo. (Mateyu 11:28-30) Wenza kanye oko. Ngothando waluleka abantu ngendlela yokumelana namaxhala, yokuphucula ulwalamano lwabo nabanye abantu, yokuphepha ukuthanda izinto eziphathekayo neyokufumana ulonwabo. (Mateyu, isahluko 5-7) Ekubeni wayebathanda abantu, wayengeneka kubantu abaneemvelaphi ezahlukahlukeneyo. Kwanabo bajongelwa phantsi babesiya kuye, beqinisekile ukuba uza kubaphatha ngobubele nangesidima. UYesu uya kuba nguMlawuli onqwenelekayo.
Kwakukho nenye indlela enamandla uYesu awayefundisa ngayo ngoBukumkani bukaThixo. Wenza imimangaliso emininzi. Wayeyenzela ntoni? Makhe sibone.
—Oku kusekelwe kwincwadi kaMateyu, kaMarko, kaLuka nekaYohane.
UYesu wafundisa njani ukuba unguKumkani onguMesiya?
UYesu wabonisa njani ukuba uza kulawula ngokusesikweni?
UYesu wakwenza kwacaca njani ukuba uBukumkani bakhe abuyi kuba yinxalenye yeli hlabathi?
UYesu wabonisa njani ukuba uza kulawula ngothando?
UBukumkani BukaThixo—Isizathu Sokuba Bubaluleke Kangaka KuYesu
UYesu wayenesizathu sokuhlala ethetha ngoBukumkani.
UBukumkani BukaThixo—Buza Kukwenzela Ntoni?
Ubukhulu becala, impendulo ixhomekeke kuwe.